DEG DEG: Chelsea Oo Kooxdeeda Ka Saartay Weeraryahan Muhiim Ah Ka Hor Kulanka Caawa Ee Manchester City - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG DEG: Chelsea Oo Kooxdeeda Ka Saartay Weeraryahan Muhiim Ah Ka Hor Kulanka Caawa Ee Manchester City
DEG DEG: Chelsea Oo Kooxdeeda Ka Saartay Weeraryahan Muhiim Ah Ka Hor Kulanka Caawa Ee Manchester City
Tammy Abraham ayaa laga saaray kooxda Chelsea ee kulanka semi-finalka FA Cup caawa la ciyaareysa kooxda Manchester City/
Inkastoo uu taam buuxa yahay islamarkaana uu yahay xiddiga ugu goolasha badan tartankan isagoo dhaliyay afar gool seddex kulan uu ciyaaray, hadana boos ayaa looga waayay ciyaartoyda uu Thomas Tuchel u soo xushay kulanka Wembley.
Weeraryahanka ayaan u dheelin Chelsea tan iyo 20kii Febraayo markaasoo la bedelay waqtigii nasashada kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen kooxda Southampton.
Abraham oo 23 sanno jir ah ayaa kaliya kooxdsa ku soo laabtay goor dhow isagoo dhaawac canqowga ah ku seegay todoba kulan.
Laakiin wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii Crystal Palace iyo labadii kulan ee Champions League ee ay la ciyaareen FC Porto.
Abraham ayaa la fahamsan yahay inuu ka careysan yahay in loo diiday inuu ka soo muuqdo shaxda kooxda tan iyo markii uu Tuchel la wareegtay kooxda.
Wuxuu ahaa mid boos joogta ah heysta markii uu joogay Frank Lampard isagoo dhaliyay 18 gool xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Weeraryahanka Ingariiska ayaa weli ah xiddiga ugu goolasha badan kooxda xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 12 gool inkastoo shaxda laga saaray tan iyo markii uu Tuchel kooxda la wareegay bishii Janaayo.
Laakiin tababaraha Jarmalka ayaa digniin u diray Abraham oo wajahaya inuu waayo booskiisa xulka England ee ciyaaraha Qaramada Yurub, isagoo u sheegay inaysan jirin qaab sahlan oo uu dib ugu soo noqon karo shaxda.